ဘယ်လို Porn စွဲကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး (Newsweek) ထိခိုက်သည် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ဘယ်လို Porn စွဲကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး (Newsweek) ထိခိုက်သည်
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုလုပ်ငန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလီယံဝန်းကျင်ရှိပြီးနှစ်စဉ်လူငယ်များစွာထံရောက်ရှိနေသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်လူ ဦး ရေ ၆၄ သန်းသည် Pornhub သို့နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်နာရီပေါင်း ၄ ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲသောလူ ၈၁ သန်းကိုခုန်ကျော်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Pornhub ၏ of ည့်သည် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်နှစ်တစ်ထောင်ခန့်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆေးခန်း International Andrology London မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်ကုသသူဒေါက်တာ Angela Gregory ။ ပြောတယ် Newsweek အွန်လိုင်း porn ၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းသူတို့ကအတိတ်ကာလကိုပြု၏ထက်လူငယ်များဘဝ၌များစွာသောအစောပိုငျးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ရင်ဆိုင်နေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်သော။
“ လိင်၊ ဆက်ဆံရေး၊ လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်တွေအကြောင်းပိုသိချင်ရင်နိုးထတာနှေးလာပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာမှမရတဲ့အတွက်ပါ” ဟုသူမကဆိုသည်။ “ အခုသင် the ည့်ခန်းကိုသွားစရာမလိုဘူး၊ မိဘတွေအိပ်ရာဝင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အိပ်ရာဝင်ဖို့စောင့်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ ဒီနေ့မင်းမှာမင်းရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေရှိတယ်၊
'' အရှက်အပျော်အပါး ''
Erica Garza, ထိုစာအုပ် '၏ဟောင်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူနှင့်စာရေးဆရာ ဟာ Off ရယူခြင်းသူမပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ masturbated အခါ, သာ 12 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ "ငါကစိတျလှုပျရှားဖှယျတှေ့ရှိပေမယ့်ငါဘယ်သူ့ကိုမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြောင်းပြောနေတာကိုကြားတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသည်လည်းအလွန်ကြောက်ခဲ့, လိင်အကြောင်းပြောနေတာဘယ်သူ့ကိုမှကိုကြားဘူး။ ဒါကြောင့်ကျနော်အပျေါမှာလဲပေမယ့်ငါကကြိုက်တယ်သိတယ်သောဤနက်နဲသောအရာဖြစ်သလိုပဲ "ဟုသူမကပြောထားပါသည် Newsweek.
ထိုအချိန်ကတည်းကယခုအသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သောလိင်သည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ၏နာကျင်မှုမှကျောင်းတွင်အနိုင်ကျင့်ခြင်းမှသူမ၏မိဘများထံမှဂရုမစိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ လုံခြုံမှုကိုမခံစားချင်ဘူး၊ အထီးကျန်မှုကိုမခံစားချင်ဘူး၊ နေ့စဉ်ခံစားနေရတဲ့ပယ်ချခံရမှုကိုမခံစားလိုခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်မဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးကျွန်မရဲ့ခြေထောက်ကြားမှာရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ”
Garza က ပို. ပင်ခက်ခဲထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပွင့်လင်းဆွေးနွေးမှုများရှိသည်ဟုအောင်, တစ်ဦးလူလတ်တန်းစားမက္ကဆီကန်မိသားစုသို့မွေးဖွားခဲ့ပြီး LA ကတစ်ကက်သလစ်ကျောင်းမှာတက်ရောက်ခဲ့သည်။ "ဘယ်သူမှအစဉ်အဆက်လိင်အကြောင်းကိုစကားပြောနှင့်တူညီသောအရာကျောင်းတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာလိင်တဦးတည်းအကြောင်းပြချက်တစ်ဦးတည်း-ပှားများအတွက်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုခစျြသူနှစ်ဦးလက်ထပ်ပြည်သူများအကြားဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်အလွန်ရှင်းလင်းသောလုပ်, "Garza ကဆိုသည်။
“ ကေဘယ်လ်တီဗွီမှာပျော့ပျောင်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုငါတွေ့ခဲ့ရပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးလည်းကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒီတော့စောစောပိုင်းကဒီစိတ်ချမ်းသာမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားမှုဟာဒီရှက်ဖွယ်ရှက်ဖွယ်ခံစားချက်နဲ့ငါအမှားတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်လို့ခံစားမိလိုက်တယ်။ အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အပျော်အပါးသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ”
ဤအချိန်တွင်အင်တာနက်သည်ပိုမိုခေတ်မီဆန်းပြားလာသည်။ "ငါကြည့်ရှုရန်စကားပြောခန်းအသစ်များရှိလိမ့်မယ်" ဟု Garza ကဆိုသည်။ “ ဓာတ်ပုံတွေကူးယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိလိမ့်မယ်၊ ထိုအခါငါ streaming များကလစ်များနိုင်ဘူး။ အရာအားလုံးဟာပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာပြီးဆွဲထုတ်ဖို့ခက်လာတယ်။ ”
'' အဘယ်သူမျှမနယ်နိမိတ် ''
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှု၏အမည်ဝှက်ခြင်း၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့်တတ်နိုင်မှုသည်ယခင်ကထက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်စေသည်။ “ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကသူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါနဲ့မပျော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ လိင်တံအရွယ်အစားကိုစိတ်ပူတဲ့အမျိုးသားတွေတိုးလာတာပါပဲ။ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမကြည့်မီ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသည့်နည်းအတိုင်း၊ အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အင်္ဂါဇာတ်ကိုသင်မည်သည့်အချိန်တွင်တွေ့ခဲ့ရသနည်း။ သင်သည်လိင်ကွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်အခြားသူတစ် ဦး ၏စိုက်ထူခြင်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်တွေ့ခဲ့ရသနည်း။ သင့်ကိုယ်သင်နှိုင်းယှဉ်စရာဘာမှမရှိဘူး အခုမင်းလုပ်နိုင်တယ်” ဟုသူမကထပ်ပြောသည်။
Garza သူမရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကိုအခြားလူများနှင့်ရင်းနှီးသောဖြစ်ခြင်းကနေသူမကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်သူမလိင်နှင့် porn နဲ့အလုပ်မဖြစ်ကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သူသိလို့ပြောပါတယ်။ "လိင်အရေးအပါဆုံးအရာကြီးကငါတကယ်ပဲမရရှိစအော်ဂဇင်ထက် ကျော်လွန်. ကနေပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုများစွာမောင်းနှင်မခံခဲ့ရကဲ့သို့စက်မှုလှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့ခံစားရရန်စတင်ခဲ့" ဟုသူမကရှင်းပြသည်။
အခြားစွဲလမ်းမှုများကဲ့သို့ပင်မကြာခဏညစ်ညမ်းသောစားသုံးမှုသည်မြင့်တက်လာလေ့ရှိသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်တူညီသောခံစားမှုကိုခံစားနိုင်ရန်အတွက်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတိုးပွားလာသောဆေးပမာဏလိုအပ်သည်။ ဂရက်ဂိုရီက“ လူအချို့အတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာသူတို့မြင်နေတဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေလုပ်ချင်တယ်။ ငါသူတို့မြင်တဲ့အမြင်မှာမြင့်တက်လာနိုင်တယ်” ဟုဂရက်ဂိုရီမှတ်ချက်ချသည်။
"သူတို့ကလိင်စိတ်နိုးထ၏တူညီသောအဆင့်အထိရရှိရန်အလို့ငှာ ပို. ပို. စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလိုအပ်ပါတယ်။ သင်သွားရပါဘူးဘယ်မှာမျှနယ်နိမိတ်, ရရှိပါသည်တစ်ချိန်ကကြသောကြောင့်? အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်ရှိလျှင်, ဘယ်လောက်ဝေးသင်သွားသလဲ? "
အွန်လိုင်း porn အတွက်မကြာသေးမီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ခေါက်-on ကိုအတိအကျဘာကြောင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်တွေရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်ရပါလိမ့်မယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိရန်ခဲယဉ်းသည်ကိုဆိုလိုသည်။ 2019 အသုံးပြုပုံကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတဝိုက် 2.5 ဘီလီယံခန့်ကလူစမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုအွန်လိုင်း porn ရှိသည် access ကိုထိနျးခြုပျဖို့ ပို. ပို. ခက်ခဲဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှလူတွေတိုးပွားလာအတိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အ porn နဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ကိုအမှန်တကယ်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။